Kooxda Real Madrid oo isha ku heysa saxiixa Kylian Mbappe, miyey iska illoobeen Neymar Jr? – Gool FM
(Madrid) 16 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay leedahay miisaaniyad ay ku sameyso saxiix lacag badan suuqa kala iibsiga xagaaga soo aaddan, iyadoo xiddiga Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe uu sheegay inuu ku jiro liiska ugu sarreeya kooxda.
20-sano jirkaan oo 62 gool u dhaliyay PSG tartammada oo dhan 91 kulan oo uu u saftay ayaa qandaraas kula jooga kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska illaa xagaaga 2022-ka.
Los Blancos ayaa la rumeysan yahay inay u aqoonsadeen ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka France inuu yahay saxiixiisa mid ku habboon Kooxda iyo xilliga ay ku dhex jirto, inkastoo tababare Zinedine Zidane uu aad ugu baahan yahay inuu uu keeno Bernabeu haddana meesha lagama saari karo in PSG ay tahay nuuca koox ay adag tahay in xiddig laga soo qaato.
Sida laga soo xigtay AS, Real Madrid ayaa daaha ka qaaday in kooxda ka dhisan caasimadda Spain ay awood u leedahay inay lacag badan ku qarash-gareyso saxiixa lagu tilmaami karo (Galacticos) ka hor xilli ciyaareedka 2020-21.
Warbixinta ayaa sheegeysa in kooxda 33-ka jeer haysata horyaalka Spain ay door-bideyso inay u dhaqaaqdo Mbappe intii ay la soo saxiixan lahayd qanaaska reer Brazil ee Neymar Jr, kaasoo weli la sheegay inuu go’aansan doono inuu ku laabto Barcelona kaddib warar badan oo la isla dhexmarayay.
Mbappe ayaa dhaliyay labo gool afartii kulan ee uu u saftay kooxdiisa PSG xilli ciyaareedkan, laakiin dhibaato muruqa ah ayaa xukumi doonta ku guuleystihii Koobkii Adduunka ee 2018 inuu ka maqnaan doono kulanka Arbacada ee Champions League ay wajahayaan kooxda uu maamulo macallin Zidane.